ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေမူကြမ်း ဝေဖန်ချက်များနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) က လွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ နည်း ဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းကို ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ တပ်စခန်းတွေအတွင်းက မဲရုံတွေကို တပ်အပြင်မှာထားမယ်ဆိုတဲ့ အချက်အပေါ် အဓိက ဝေဖန်ထောက်ပြကြတာပါ။
ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၀ ကလည်း ကန့်ကွက်စာတခု ထုတ်ထားပါတယ်။ ဝေဖန်ချက်တွေအပေါ် ကော်မရှင်ဘက်က ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပါသလဲ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ကရော ဘယ်ကိစ္စကို ကန့်ကွက်ကြတာပါလဲ …. ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ဗွီအိုအေသတင်းထောက် မမေခက သတင်းပေးပို့ ထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၃ရက်နေ့က စစ်တပ်အတွင်းက မဲရုံတွေကို အပြင်မှာ ထားမယ်ဆိုတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်ပါဝင်တဲ့ ဥပဒေကြမ်းကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC က လွှတ်တော်ကို ပေးပို့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေကို ၅ ကြိမ်မြောက် ပြင်ဆင်ချိန်မှာ ပါလာတဲ့ ထပ်မံဖြည့်စွက်ချက် တချက်ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်အတွင်းက မဲရုံတွေကို တပ်ပြင်ပနေရာချဖို့ လုပ်ဆောင်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမြင်အမျိုးမျိုးတွေရှိနေသလို ကော်မရှင် လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ မေးခွန်းထုတ်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးမြင့်နိုင်က အခုလို တုံ့ပြန် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်ဦးသောင်းအေးကတော့ အခုထုတ်ပြန်ဖို့လုပ်နေတဲ့ နည်းဥပဒေဟာ တပ်မတော်ရဲ့ သဘောသဘာဝနဲ့ တည်ဆောက်ပုံကို သေချာမလေ့လာဘဲ လုပ်ဆောင်ထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
“တပ်မတော်ရဲ့ သဘော သဘာဝနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ တည်ဆောက်ပုံ တပ်မတော်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ တပ်မတော်ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန် ၊ ဒါတွေကို သေသေချာချာ ထဲထဲဝင်ဝင် သိပြီးမှ ဒီ နည်းဥပဒေ ထုတ်ပြန်သင့်တယ်လို့ အန်ကယ်ကတော့ ဒီလိုမြင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တပ်တွေက တချို့တပ်တွေဆိုရင် ရပ်ရွာတွေနဲ့ အရမ်းဝေးတယ်။ သူ့ ထမ်းဆောင်ရတဲ့ တာဝန်တွေကလည်း အင်မတန် ကြီးလေးတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။ အဲဒီတပ်အ၀န်းအ၀ိုင်းလည်း လုပ်ငန်းတာဝန် ပစ်ပယ်ပြီးတော့ ဝေးလံတဲ့နေရာမှာ သွားပြီးတော့ မဲရုံမှာ မဲဆန္ဒပေးရမယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေးတော့ အခက်အခဲတွေ ရှိသွားနိုင်တယ်။ လုံခြုံရေးလည်း ထိခိုက်နိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒါတွေကတော့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှ အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။”
အခုလို တပ်တွင်းမဲရုံတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကော်မရှင်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဝေဖန်မှုတွေရှိနေချိန်နဲ့ တချိန်ထဲမှာဘဲ အမေရိကန်အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်တဲ့ International Foundation for Electoral Systems(IFES) ကနေ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အသီးသီးမှာ အသုံးပြုမယ့် အိုင်တီ ပစ္စည်းတွေအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အငြင်းပွားဖွယ်ရာတွေ ရှိလို့ဆိုပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၀ က ကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် ကန့်ကွက်စာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ မတူကွဲပြားခြင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်စန္ဒာဦးက ဘာကြောင့် ကန့်ကွက်ရသလဲဆိုတာ အခုလို ပြောပါတယ်။
“ အဲဒီ သူ့ရဲ့ အမေရိကန်က ၀ယ်တဲ့ အီလက်ထရောနစ်တွေကို သွင်းလာတာ ဒီလိုမျိုး တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း မဲမသမာမှုတွေဖြစ်တယ် အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကန့်ကွက်တာပေါ့နော်။”
အခု နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၀ က ကန့်ကွက်တဲ့ကိစ္စဟာ သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသလို စာရွက်နဲ့သာ မဲပေးတာဖြစ်လို့ ကန့်ကွက်လွှာမှာပါတဲ့အတိုင်း မဲစာရင်းတွေ မသမာမှုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အဲဒီအတွက် စိတ်ပူစရာ မလိုဘူးလို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
အခုလို စစ်တပ်မဲရုံတွေကို တပ်ပြင်ထားမယ်ဆိုတဲ့ ကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုဟာ တရားမျှတရဲ့လားလို့ မေးခွန်းထုတ်ခံနေရတာ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၀က ကန့်ကွက်နေတာတွေဟာ ကော်မရှင်ရဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အားနည်းချက်ကြောင့်လို့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ PACE ရဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ စိုင်းရဲကျော်စွာမြင့်က ပြောပါတယ်။
“တပ်ထဲမဲထည့်ရင်ပါတီတခုထဲကိုမဲထည့်မှာဘဲဆိုတဲ့အပေါ်အခြေခံလုပ်တာလို့ ကျနော်မြင်တယ်လေ။ ဒါကတော့ မဲရုံရွှေ့တာနဲ့ ဒါပြောင်းမယ်လို့ အဲဒီတခုတည်းနဲ့တော့ မလုံလောက်ဘူး ။ ဆိုတော့ အရေးကြီးတဲ့ ဖြစ်စဉ်က ဘာလဲဆိုတော့ ကောင်းတဲ့ ဥပဒေဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပါတီတွေအားလုံး၊ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးသဘောတူတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ရင် ၊ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကို ပိုယုံကြည်မယ်။ ခုကကျတော့ ကော်မရှင်ကသူ့စဉ်းစားချက် တခုထဲနဲ့ လုပ်တာဖြစ်နေတယ်။ ဟိုတနေ့က ထုတ်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အပါအ၀င် ပါတီ၂၀ထုတ်တဲ့ ဒီကြေညာချက်က ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပေါ် အခြေခံပြီးတော့ ဖြစ်လာတဲ့ အကြောင်းအရင်းလို့ ကျနော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ ဆိုတော့ လက်ရှိ Process တွေဘယ်လိုလုပ်နေသလဲဆိုတာကို ပါတီတွေရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ပုံမှန်လေးကျနော်တို့ တွေ့ဆုံတာမျိုး ဆွေးနွေးတာမျိုးမလုပ်တဲ့အတွက် အဲဒီအကျိုးဆက်ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတယ်။ ကော်မရှင်ရဲ့ ပြင်ပ ဆက်ဆံရေးတွေကို ပြောင်းဖို့လိုတယ်။”
ဒီလို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားနည်းတယ်လို့ ဝေဖန်နေမှုအပေါ် ကော်မရှင်ဘက်ကတော့ အခုလို တုံ့ပြန်ပါတယ်။
“ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ မေးသမျှလည်း ဖြေပေးနေပါတယ်။ အခုလည်းမေးတာ အခု ကျနော်တို့ ဖြေတာပါပဲ။ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့ ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဘာမှထိန်ချန် လုပ်တာမရှိပါဘူး။”
ကော်မရှင်က တင်သွင်းထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာပြင်ဆင်ရေး နည်းဥပဒေကြမ်း ကိုရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကန့်ကွက်တဲ့သူရှိခဲ့ရင်တော့ ဆွေးနွေးပြီး မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ နညျးဥပဒမေူကွမျး ဝဖေနျခကျြမြားနဲ့ ရငျဆိုငျနရေ
ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ (UEC) က လှတျတျောကိုတငျသှငျးထားတဲ့ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ နညျး ဥပဒေ ပွငျဆငျခကျြမူကွမျးကို ဝဖေနျပွောဆိုတာတှေ ရှိနပေါတယျ။ အထူးသဖွငျ့တော့ တပျစခနျးတှအေတှငျးက မဲရုံတှကေို တပျအပွငျမှာထားမယျဆိုတဲ့ အခကျြအပျေါ အဓိက ဝဖေနျထောကျပွကွတာပါ။ ဒီအတောအတှငျးမှာပဲ နိုငျငံရေးပါတီ ၂၀ ကလညျး ကနျ့ကှကျစာတခု ထုတျထားပါတယျ။ ဝဖေနျခကျြတှအေပျေါ ကျောမရှငျဘကျက ဘယျလိုတုံ့ပွနျပါသလဲ၊ နိုငျငံရေးပါတီတှေ ကရော ဘယျကိစ်စကို ကနျ့ကှကျကွတာပါလဲ …. ဆကျသှယျမေးမွနျးထားတဲ့ ဗှီအိုအသေတငျးထောကျ မမခေက သတငျးပေးပို့ ထားပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ နိုဝငျဘာ ၃ရကျနကေ့ စဈတပျအတှငျးက မဲရုံတှကေို အပွငျမှာ ထားမယျဆိုတဲ့ ရှေးကောကျပှဲ ဆိုငျရာ နညျးဥပဒေ ပွငျဆငျခကျြပါဝငျတဲ့ ဥပဒကွေမျးကို ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ UEC က လှတျတျောကို ပေးပို့ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ရှေးကောကျပှဲနညျးဥပဒကေို ၅ ကွိမျမွောကျ ပွငျဆငျခြိနျမှာ ပါလာတဲ့ ထပျမံဖွညျ့စှကျခကျြ တခကျြဖွဈပါတယျ။ စဈတပျအတှငျးက မဲရုံတှကေို တပျပွငျပနရောခဖြို့ လုပျဆောငျတာနဲ့ ပတျသတျပွီး အမွငျအမြိုးမြိုးတှရှေိနသေလို ကျောမရှငျ လုပျဆောငျခကျြနဲ့ ပတျသတျလို့ မေးခှနျးထုတျနတောတှေ ရှိပါတယျ။ ဒီအပျေါမှာရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးမွငျ့နိုငျက အခုလို တုံ့ပွနျ ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။
ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီ ကိုယျစားလှယျဦးသောငျးအေးကတော့ အခုထုတျပွနျဖို့လုပျနတေဲ့ နညျးဥပဒဟော တပျမတျောရဲ့ သဘောသဘာဝနဲ့ တညျဆောကျပုံကို သခြောမလလေ့ာဘဲ လုပျဆောငျထားတာ ဖွဈတယျလို့ ဝဖေနျလိုကျပါတယျ။
“တပျမတျောရဲ့ သဘော သဘာဝနဲ့ တပျမတျောရဲ့ တညျဆောကျပုံ တပျမတျောရဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံ တပျမတျောရဲ့ လုပျငနျးတာဝနျ ၊ ဒါတှကေို သသေခြောခြာ ထဲထဲဝငျဝငျ သိပွီးမှ ဒီ နညျးဥပဒေ ထုတျပွနျသငျ့တယျလို့ အနျကယျကတော့ ဒီလိုမွငျတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ တပျတှကေ တခြို့တပျတှဆေိုရငျ ရပျရှာတှနေဲ့ အရမျးဝေးတယျ။ သူ့ ထမျးဆောငျရတဲ့ တာဝနျတှကေလညျး အငျမတနျ ကွီးလေးတဲ့ ကိစ်စတှဖွေဈတယျ။ အဲဒီတပျအဝနျးအဝိုငျးလညျး လုပျငနျးတာဝနျ ပဈပယျပွီးတော့ ဝေးလံတဲ့နရောမှာ သှားပွီးတော့ မဲရုံမှာ မဲဆန်ဒပေးရမယျဆိုတော့ တျောတျောလေးတော့ အခကျအခဲတှေ ရှိသှားနိုငျတယျ။ လုံခွုံရေးလညျး ထိခိုကျနိုငျတယျ၊ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ဒါတှကေတော့ ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျမှ အဆငျပွမေယျလို့ ထငျပါတယျ။”
အခုလို တပျတှငျးမဲရုံတှနေဲ့ပတျသတျပွီး ကျောမရှငျလုပျဆောငျခကျြကို ဝဖေနျမှုတှရှေိနခြေိနျနဲ့ တခြိနျထဲမှာဘဲ အမရေိကနျအခွစေိုကျ ကုမ်ပဏီတခုဖွဈတဲ့ International Foundation for Electoral Systems(IFES) ကနေ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အသီးသီးမှာ အသုံးပွုမယျ့ အိုငျတီ ပစ်စညျးတှအေတှကျ တငျဒါအောငျမွငျခဲ့တာနဲ့ ပတျသတျလို့ အငွငျးပှားဖှယျရာတှေ ရှိလို့ဆိုပွီး ကွံ့ခိုငျရေးပါတီ အပါအဝငျ နိုငျငံရေးပါတီ ၂၀ က ကျောမရှငျရဲ့ လုပျဆောငျခကျြအပျေါ ကနျ့ကှကျစာ ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ ဒါနဲ့ ပတျသကျလို့ မတူကှဲပွားခွငျးနဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးပါတီဥက်ကဌ ဒျေါစန်ဒာဦးက ဘာကွောငျ့ ကနျ့ကှကျရသလဲဆိုတာ အခုလို ပွောပါတယျ။
“ အဲဒီ သူ့ရဲ့ အမရေိကနျက ဝယျတဲ့ အီလကျထရောနဈတှကေို သှငျးလာတာ ဒီလိုမြိုး တခွားနိုငျငံတှမှောလညျး မဲမသမာမှုတှဖွေဈတယျ အဲဒါကွောငျ့မို့လို့ ကနျ့ကှကျတာပေါ့နျော။”
အခု နိုငျငံရေးပါတီ ၂၀ က ကနျ့ကှကျတဲ့ကိစ်စဟာ သူတို့နဲ့ သကျဆိုငျခွငျးမရှိသလို စာရှကျနဲ့သာ မဲပေးတာဖွဈလို့ ကနျ့ကှကျလှာမှာပါတဲ့အတိုငျး မဲစာရငျးတှေ မသမာမှုဖွဈစနေိုငျတယျဆိုတာ မဖွဈနိုငျတာကွောငျ့ အဲဒီအတှကျ စိတျပူစရာ မလိုဘူးလို့ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ တာဝနျရှိသူတှကေ ပွောပါတယျ။
အခုလို စဈတပျမဲရုံတှကေို တပျပွငျထားမယျဆိုတဲ့ ကျောမရှငျရဲ့ လုပျဆောငျမှုဟာ တရားမြှတရဲ့လားလို့ မေးခှနျးထုတျခံနရေတာ၊ နိုငျငံရေးပါတီ ၂၀က ကနျ့ကှကျနတောတှဟော ကျောမရှငျရဲ့ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှု အားနညျးခကျြကွောငျ့လို့ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ ပွညျသူ့လှုပျရှားမှုအဖှဲ့ PACE ရဲ့ အမှုဆောငျဒါရိုကျတာ စိုငျးရဲကြျောစှာမွငျ့က ပွောပါတယျ။
“တပျထဲမဲထညျ့ရငျပါတီတခုထဲကိုမဲထညျ့မှာဘဲဆိုတဲ့အပျေါအခွခေံလုပျတာလို့ ကနြျောမွငျတယျလေ။ ဒါကတော့ မဲရုံရှတေ့ာနဲ့ ဒါပွောငျးမယျလို့ အဲဒီတခုတညျးနဲ့တော့ မလုံလောကျဘူး ။ ဆိုတော့ အရေးကွီးတဲ့ ဖွဈစဉျက ဘာလဲဆိုတော့ ကောငျးတဲ့ ဥပဒဖွေဈဖွဈဆိုးတာဖွဈဖွဈ ပါဝငျယှဉျပွိုငျမယျ့ ပါတီတှအေားလုံး၊ကိုယျစားလှယျ အားလုံးသဘောတူတဲ့ ပွုပွငျပွောငျးလဲမှု ဖွဈရငျ ၊ ရှေးကောကျပှဲဖွဈစဉျကို ပိုယုံကွညျမယျ။ ခုကကတြော့ ကျောမရှငျကသူ့စဉျးစားခကျြ တခုထဲနဲ့ လုပျတာဖွဈနတေယျ။ ဟိုတနကေ့ ထုတျတဲ့ ပွညျထောငျစု ကွံ့ခိုငျရေးနဲ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ အပါအဝငျ ပါတီ၂၀ထုတျတဲ့ ဒီကွညောခကျြက ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုအပျေါ အခွခေံပွီးတော့ ဖွဈလာတဲ့ အကွောငျးအရငျးလို့ ကနြျောတို့ပွောလို့ရတယျ။ ဆိုတော့ လကျရှိ Process တှဘေယျလိုလုပျနသေလဲဆိုတာကို ပါတီတှရေဲ့ စိုးရိမျပူပနျမှုတှကေို ပုံမှနျလေးကနြျောတို့ တှဆေုံ့တာမြိုး ဆှေးနှေးတာမြိုးမလုပျတဲ့အတှကျ အဲဒီအကြိုးဆကျကွောငျ့ ဒီလိုဖွဈတယျလို့ ယူဆတယျ။ ကျောမရှငျရဲ့ ပွငျပ ဆကျဆံရေးတှကေို ပွောငျးဖို့လိုတယျ။”
ဒီလို ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုအားနညျးတယျလို့ ဝဖေနျနမှေုအပျေါ ကျောမရှငျဘကျကတော့ အခုလို တုံ့ပွနျပါတယျ။
“ ပှငျ့လငျးမွငျသာစှာ ဆောငျရှကျနပေါတယျ။ မေးသမြှလညျး ဖွပေေးနပေါတယျ။ အခုလညျးမေးတာ အခု ကနြျောတို့ ဖွတောပါပဲ။ ပှငျ့လငျးမွငျသာစှာနဲ့ ကနြျောတို့ ဆောငျရှကျနပေါတယျ။ ဘာမှထိနျခနျြ လုပျတာမရှိပါဘူး။”
ကျောမရှငျက တငျသှငျးထားတဲ့ ရှေးကောကျပှဲ ဆိုငျရာပွငျဆငျရေး နညျးဥပဒကွေမျး ကိုရကျပေါငျး ၉၀ အတှငျး ဆှေးနှေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ ကနျ့ကှကျတဲ့သူရှိခဲ့ရငျတော့ ဆှေးနှေးပွီး မဲခှဲ ဆုံးဖွတျရမှာဖွဈပါတယျ။
မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းမူကြမ်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကောက်ခံပြုစုမည်
၂၀၂၀ ပြည့် ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆန္ဒရှင်အားလုံး မဲပေးနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေ
သမ္မတနဲ့အတိုင်ပင်ခံ ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးခွင့်ရှိဟု ရွေး/ကော် ထုတ်ပြန်
ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကြားက အာဖဂန်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ
၂၀၂၀ ကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် Facebook စည်းကမ်းတင်းကျပ်မည်
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အရည်အချင်းရှိသူတွေကို မဲပေးဖို့ NLD တိုက်တွန်းမည်